A Jụrụ Ya na Nazaret | Ihe Ndị Mere ná Ndụ Jizọs
MATIU 9:27-34; 13:54-58 MAK 6:1-6
JIZỌS AGWỌỌ ONYE ÌSÌ NA ONYE OGBI
NDỊ NAZARET AJỤ JIZỌS
Ọrụ zuru Jizọs ahụ́ taa. Mgbe Jizọs gachara ihe niile ọ gara na Dikapọlis, ọ gwọrọ nwaanyị na-arịa ọrịa oruru ọbara, kpọlitekwa ada Jeirọs n’ọnwụ. Mana, a ka nwere ọrụ ndị ka na-eche ya n’ụbọchị ahụ. Mgbe Jizọs si n’ụlọ Jeirọs na-apụ, ndị ìsì abụọ sowere ya na-eti mkpu, sị: “Meere anyị ebere, Nwa Devid.”—Matiu 9:27.
Ọkpụkpọ ahụ ha kpọrọ Jizọs “Nwa Devid” gosiri na ha kwetara na Jizọs ga-achị n’ocheeze Devid, nakwa na ọ bụ ya bụ Mesaya ahụ. Jizọs mere ka ọ nụghị mkpu ahụ ha na-eti. Ọ ga-abụ na ihe mere o ji mee otú ahụ bụ ka ọ hụ ma hà ga-anọgide na-arịọ ya. Ha nọgidekwara na-arịọ ya. Mgbe Jizọs banyere n’ime otu ụlọ, ha sooro ya banye. Jizọs jụrụ ha, sị: “Ùnu nwere okwukwe na m pụrụ ime ihe a?” Ha ji obi ha dum zaa ya, sị: “Ee, Onyenwe anyị.” Mgbe ha kwuru otú a, Jizọs metụrụ ha aka n’anya ma sị ha: “Ya meere unu dị ka okwukwe unu si dị.”—Matiu 9:28, 29.
Ozugbo ahụ, ha hụwara ụzọ. Jizọs gwara ha ka ha ghara ime ka ndị ọzọ mara ihe o meere ha otú ahụ ọ gwakwara ndị ọzọ ọ gwọrọla. Mana, n’ihi otú ọṅụ si ju ha obi, ha mechara gaa kọsawa banyere Jizọs.
Ka mmadụ abụọ ahụ ọ gwọrọ ọrịa na-apụ, ndị mmadụ kpọtaara Jizọs otu nwoke na-anaghị ekwuli okwu n’ihi na mmụọ ọjọọ ji ya. Jizọs chụpụrụ mmụọ ọjọọ ahụ ji ya, nwoke ahụ malitekwara ikwu okwu ozugbo. Ihe a juru ìgwè mmadụ ahụ anya. Ha amalite ịsị: “A hụtụbeghị ụdị ihe a n’Izrel.” Ndị Farisii sokwa nọrọ ebe ahụ. Ha enweghị ike ikwu na ọ bụghị Jizọs rụrụ ọrụ ebube ndị ahụ. Ma, ihe ha meziri bụ iboghachi Jizọs ebubo ahụ ha na-ebobu ya na ọ bụghị ike Chineke ka o ji na-arụ ọrụ ebube. Ha sịrị: “Ọ bụ ike onye na-achị ndị mmụọ ọjọọ ka o ji achụpụ ndị mmụọ ọjọọ.”—Matiu 9:33, 34.
Obere oge ihe a mechara, Jizọs laghachiwere obodo a mụrụ ya bụ́ Nazaret. Mana ugbu a, ya na ndị na-eso ụzọ ya so. Ihe dị ka otu afọ gara aga, Jizọs kụziri ihe n’ụlọ nzukọ dị ebe ahụ. Otú o si kụzie ihe ná mbido juru ndị mmadụ anya. Mana, ka oge na-aga, ihe ndị ọzọ ọ kụziri wewere ha iwe nke na ha chọwara igbu ya. Ugbu a, Jizọs chọwakwara ọzọ otú ọ ga-esi nyere ndị obodo ya aka.
N’Ụbọchị Izu Ike, Jizọs gaghachiri n’ụlọ nzukọ ahụ izi ihe. Ihe ọ kụziri tụrụ ọtụtụ ndị n’anya. Ha jụwadịrị, sị: “Olee ebe nwoke a si nweta amamihe a na ọrụ ndị a dị ike? Onye a ọ́ bụghị nwa ọkwá nkà ahụ? Ọ́ bụghị nne ya ka a na-akpọ Meri, ọ̀ bụkwa na ụmụnne ya ndị ikom abụghị Jems na Josef na Saịmọn na Judas? Ọ̀ bụ na anyị na ụmụnne ya ndị inyom niile anọghị? Oleezi ebe nwoke a si nweta ihe ndị a niile.”—Matiu 13:54-56.
Ndị mmadụ eleghị Jizọs anya na ọ bụ onye pụrụ iche, kama ha lere ya anya naanị ka nwa afọ obodo ha. Ha nọ na-eche, sị: ‘Anyị ma mgbe ọ na-etolite, oleekwanụ otú onye a si abụ Mesaya ahụ?’ N’ihi ya, n’agbanyeghị amamihe niile Jizọs nwere na ọrụ ebube ndị ọ na-arụ nke gosiri na ọ bụ Mesaya ahụ, ha jụrụ ya. Ndị ikwu Jizọs jụdịrị ya n’ihi na ha ma onye ọ bụ. Ọ bụ ya mere Jizọs ji sị: “A na-enye onye amụma nsọpụrụ ma e wezụga n’obodo a mụrụ ya nakwa n’ụlọ ya.”—Matiu 13:57.
N’eziokwu, o juru Jizọs anya na ndị obodo ya enweghị okwukwe n’ebe ọ nọ. N’ihi ya, ọ rụghị ọrụ ebube ebe ahụ ma “e wezụga ibikwasị mmadụ ole na ole na-arịa ọrịa aka ma gwọọ ha.”—Mak 6:5, 6.
Gịnị ka ndị ìsì ahụ gosiri na ha kweere mgbe ha kpọrọ Jizọs “Nwa Devid”?
Olee ebe ndị Farisii kwuru na ọ bụ ebe Jizọs si enweta ike o ji arụ ọrụ ebube?
Olee otú e si nabata Jizọs na Nazaret, oleekwa ihe mere e ji si otú ahụ nabata ya?
mailto:?body=Ọ Rụrụ Ọrụ Ebube, Ma A Jụrụ Ya Ma na Nazaret%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1102014651%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Ọ Rụrụ Ọrụ Ebube, Ma A Jụrụ Ya Ma na Nazaret